Okwu Mmalite Genera * Usoro amị a mejupụtara otu ihe na - achọ mma, ihe na - agbaze ikuku, igwe na - ekesa ikuku, igwe ikuku… wdg. * O zuru akpaka site na ihe oriri ruo n’ikpeazụ gbazee ịkpa akwa, teknụzụ tozuru okè, ọrụ kwụsiri ike, PFE nwere ike iru 95 na n’elu. * Ike imeputa site na 1500kg, ikike imeputa ya kpọmkwem dabere na igwe eji eme ihe ma gbazee nha ebu. Paramita teknụzụ 1.Model: HL-1600 2.Mpepụta ụdị: Vetikal Blow Down 3.Voltag ...
Emebere ngwa ngwa ahaziri iche ma megharia usoro nke meltblown maka ndị ahịa nwere nkọwa sitere na 400mm-1600mm. Enwere ike iji eriri mmepụta reciprocating ọ bụghị naanị maka imepụta akwa meltblown, kamakwa maka imepụta ihe nhichapụ mmiri na ihe nhicha ikuku. A na-ejikarị ihe eji emepụta mmiri eji eme ihe maka mmiri mmiri, ụlọ ọrụ mmanụ na ụlọ ọrụ kemịkalụ, yana ụdị edo edo, izizi ihe zuru oke, mmetụta pụtara ìhè, na nnukwu ike ...
Ngwá ọrụ ndị ọzọ na-enyere aka na-agbaze ma na-eme ka mmiri dị n'ime ya bụ ọkụ a na-asacha ya. Mgbe amịpụtara nwa oge, adịghị ọcha nke oghere ndọtị ga-apụta. N'oge a, ọ dị mkpa iji dochie anya ntụtụ a wụrụ awụ anwụ. Ekwesịrị ịgba ọkụ dochie anya isi ntụtụ ahụ iji wepụ ihe polma ndị ọzọ na-adịghị ọcha na isi nwụrụ. A na-agbanye ọkụ ahụ na spinneret iji wepu polymer residual na adịghị adịghị mma. Na akụrụngwa nke gbazee-...
Ọrụ njikwa eletriki E nwere ụdịdị abụọ. Ihe ngosi nke mbu bu ihe nlere anya kwesiri, nke abuo bu kwa mmezi. Ọ bụ ọnọdụ nkịtị mgbe etinyere plọg ndị niile na-adịghị arụzi ụlọ elu na ala. Amalitere onye mgbapụ ahụ, jiri mkpịsị ugodi zụta ndị ọrụ ahụ mgbe ọnweghị onye nọ na ya. Ndị ọrụ ahụ na-pịa bọtịnụ nkwụsị iji kwụsị onye na-ewepụ ya. Mgbe enweta akara igodo, a na-amalite ma na-agba ọsọ ọsọ. Ibepu otu n’ime plọg ndị na-abụghị ndozi ma fanye igbe ndozi na ndozi…
Ihe onyonyo ebe a na-eme ihe ngosi 1
Foto ebe a na-eme Escalator
Foto ebe ihe nkiri na Escalator
Ndị ọrụ na - arụ ọrụ bụ ụdị ngwa ọrụ na - agba ọsọ nke ejiri igwe na - ebu eriri na - enye ihe eji eme ihe na eriri pụrụ iche. O nwere otutu uru di ka ikike njem buru ibu, ndi oru ugbo n’enye ndi njem. Yabụ ihe achọrọ nchekwa dị elu karịa akụrụngwa ndị ọzọ. A na-ejikarị ya eme ihe n'ebe ọha na eze na-enwetakarị mgbasa ozi mmadụ, dịka ụlọ ahịa, klọb, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu. Mwube ihe bụ isi mbanye nwere ezu…